Ap1 Khabar | » ईजरायल प्यालेस्टाईन युद्धमा फेसबुक किन मुछियो ? ईजरायल प्यालेस्टाईन युद्धमा फेसबुक किन मुछियो ? – Ap1 Khabar
ईजरायल प्यालेस्टाईन युद्धमा फेसबुक किन मुछियो ?
ए.पी. वन खबर २०७८ जेष्ठ १५, शनिबार २१:४६
प्रमिला कार्कीको लेख
फेसबुक, नेपालमा सामाजीक संजाल भनैकै फेसबुक हो भन्दा फरक पर्दैन । ५ विलियन भन्दा बढी मानिसले डाउनलोड गरेको एप । जसको रिभ्यु नै ११६ मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले गरिसकेका छन् । तर, गुगल प्ले स्टोरमा यसको रेटि∙ २।३ स्टार मात्र छ । के यो स्वाभाविक छ रु अहिले विश्वका लोकप्रिय सोसल मिडिया साईटका एपहरु टिकटक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिड्ढडिन, टेलिग्राम आदि मध्ये सबैभन्दा कम स्टार रेटिङ पाउने पनि फेसबुक नै हो । अचम्म लाग्दो छैन त रु एकातर्फ निक्कै पपुलर सोसल मिडिया अर्कातर्फ दयालाग्दो रेटिङ ।
गुगल प्ले स्टोरको स्टार रेटिङ कुनै पनि एपको लोकप्रियताको मापन गर्ने आधार पनि हो । ४ भन्दा माथि स्टार रेटिङ भएकालाई राम्रा एप, ३ भएकालाई सामान्य र त्यो भन्दा कम भएकालाई कम लोकप्रिय ठानिन्छ । त्यसको अर्थ के फेसबुकले आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै गएको हो रु फेसबुकको २।३ स्टार रेटिङ सँगै हालैका दिनमा घटेको एक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको सम्बन्ध छ । प्यालेस्टाईन र ईजरायल विचको द्वन्द्व । मध्यपूर्वका यि दुई देश बिच बर्षौं देखि रहँदै आएको विवाद पछिल्लो समयमा नयाँ चरणमा पुग्यो र दुई देश विच युद्धको स्थिती बन्यो । एक आपसमा रकेट प्रहारको श्रृखला नै चल्यो । दुबैतर्फ उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरु हताहत भए, हज्जारौं घरबार विहिन हुनपुगे । भौतिक क्षती त कति कति कुरै नगरौं । रकेट प्रहारमा दुवै देशका ठूला भवन र सवारी साधनहरुमा समेत ठूलो क्षति पुग्यो । ठूलो जनधनको नोेक्सानी र अन्तर्राष्ट्रिय समूहको निरन्तरको दबाब पश्चाद दुवै देश अलि मथ्थर भए ।
छिमेकी राष्ट्र ईजिप्टले मध्यस्तता गर्दै संबादमा दुवै देशलाई ल्याएपछी तत्कालका लागि युद्धविराम घोषणा गरियो । तर, यसै कारणले घटेको फेसबुकको स्टार रेटिङमा भने कुनै सुधार हुने छाँटकाँट छैन । बरु अघिल्लो हप्ताको तुलनमा अझ तल झरेको छ । यही द्वन्द्वका कारण भएको मानव अधिकार हनन र जनधनको क्षतिको विरुद्धमा गरिएको एक किसिको डिजिटल प्रोटेस्टका क्रममा फेसबुकले रेटिङ गुमाएको हो । डिजिटल वल्र्डमा रमिरहेको शिक्षित सामाजिक संजालका प्रयोगकर्ताले फेसबुकको रेटिङ घटाईदिने लहरै उचाले पछि यस्तो स्थिती बनेको हो ।
फेसबुक जस्तो लोकप्रिय सामाजिक संजालले द्वन्द्व घटाउन सहयोग पु¥याउनुको सट्टा आपसी सद्भाव खल्बल्याउने सामाग्री प्रकासन प्रसारणमा रोक लगाउन नसकेको भन्दै यो प्रोटेस्ट अगाडि आएको हो । एक आपसमा घृणा बढाउने किसिमका सामाग्री प्रकासन गरेको र दुवै देश विचको मदभेद बढाउन थप बल पुगेको प्रयोगकर्ताको आरोप हो । यसमा खास गरि प्यालेस्टिाईनी समर्थकको बिमती बढी छ । फेसबुकलाई इजरायल पक्षलाई समर्थन पुग्ने कन्टेन्ट प्रकासन गरेको र प्यालेस्टाईनी समर्थकका पोष्टहरु डिलेट गरिदिएको तथा पब्लिस नगरिदिएको आरोप छ । त्यसैले रेटिङ घटाईदिन प्यालेस्टाईनी समर्थकले अभियाननै चलाएका थिए ।
यस किसिमको प्रोटेस्ट प्रयोगकर्ताहरुले पहिलो पटक गरेका भने होईनन् । आम मानिसको तथ्याङक सुरक्षा विवादका क्रममा भारतमा टिकटक, जर्ज ©्लोईड हत्या घटनाका क्रममा अमेरिकाका प्रमुख संचार माध्यम, कतार ब्लकेडका क्रममा अल जजिरा टेलिभिजन र विभिन्न सेलिब्रेटिको पोष्ट तथा एकाउन्ट सस्पेन्सन विवादका क्रममा ट्विटर आदिले पनि यस्तै प्रोटेस्टको सामना गर्दै आफ्ना रेटिङ गुमाएका थिए । तर, गुगले यस क्रममा गरिएका नेगेटिभ रिभ्यू र घटाईएका रेटिङलाई बोगस को रुपमा हटाईएको थियो भने रेटिङलाई समेत पुनस्र्थपित गरिदिएको थियो । फेसबुकका हकमा पनि त्यही होला भनेर मैंले शुरुमा त भिडियो बनाईहाल्न हतार पनि गरिन । तर, यो भिडियो तयार पार्दा सम्म पनि रेटिङ अझै २।३ स्टार नै छ ।
धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिपछि सेयर बजारमा पहिरो, ‘जोखिमयुक्त’ लगानीकर्ताको आधा खर्ब डुब्यो
२०७८ असार २, बुधबार १६:३६
सर्लाहीको बरहथवामा पानीमा डुबेर २बर्षको बालकको मृत्यु
२०७८ असार २, बुधबार १४:५३
२०७८ असार २, बुधबार १२:२८
२०७८ असार २, बुधबार १२:१८
सेबोनको कदमप्रति लगानीकर्ताका संघसंगठन रुष्ट, भन्छन्, ‘लगानी असुरक्षित बनाउने काम भयो’